ဟင်္သာတမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်ညီလာခံ ~ ဒီမိုဝေယံ
ဟင်္သာတမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်ညီလာခံ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဟင်္သာတမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ် အလုပ်အမှု့ဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၂၁) ဦးကိုမကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ရွေးချယ်တင်မြှေက်ရန်ရှိပါသည်။ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် ရပ်ကျေးညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်(၄၀၀)ခန့်မှ ရွေးချယ်တင်မြှေက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်။မဲစနစ် နဲ့ လည်း မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်….
ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ အောက်ခြေမှစပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် လူကောင်းလူတော်များ ကိုရွေးချယ်ရန် မှာမြို့နယ်ညီလာခံသည် အထူးအချက်အချာကျ ပြီးအရေးကြီးဆုံး ပါတီအတွင်း ခိုင်မာတောင့် တင်းမှု့ သတ်မှတ် နိုင်ပါမည်။
(၂)မိမိကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ ကွက်သူ
(၄)အမှန်ကို ဆောင်ပြီး အမှားကိုရှောင်နိုင်သူ
(၅)အများအကျိုးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သူဖြစ်သင့် ပါတယ်။
(၂)ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကြွင်း မဲ့ ယုံကြည်သူ
(၅)မတရားသည့် ဥပဒေအမိန့်အာဏာများကို တာဝန်အရဆန့်ကျင်သူ
(၇)ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်ဓါတ် အပြည့်ရှိသူ
ဟင်္သာတမြို့နယ်။အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှု့ဆောင်များရွေးချယ်ရာတွင် အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြှေက် နိုင်ရန်နှင့်လူကောင်းလူတော်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက် နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်မတို့လက် လှမ်းမှီ သမျှ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် (၁၁) ဦးကို၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်များ ကိုသေချာသုံးသပ်ပြီး (၁)မြို့မိမြို့ဖ (၂)၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများ(၃)ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ(၄)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် လူကြီးလူငယ်များ(၅)လှု့မှု့ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များနျင့်တိုင်ပင်ပြီး၎င်းတို့၏ သဘော ထားနဲ့ ဆန္ဒများကို တောင်းခံကာ ပမာဏရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် ရာနှုန်းပြည့် သဘောဆန္ဒ တူညီခြင်း မရှိကြပါ။ သဘောထားအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် အများစု ဆန္ဒ သဘောထားကို မူတည်ပြီး စာရင်ပြုစု ထားသော်လည်း မဖြစ်မနေရွေးချယ်သင့်သည့် သဘောထားဆန္ဒ မရှိပါ။ရွေးချယ်ရန်တာဝန်မှာ မြို့နယ်ညီလာ ခံကိုယ်စားလှယ်များသာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်.. ၄င်းတို့ရွေးချယ် ပြီးပါကလည်းကျန် တဲံသူအနေဖြင့်မည်သို့မျှ ကန့်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။အများဆန္ဒ ကိုလေးစားလိုက်နာရမည်သာဖြစ်ပါတယ်။၄င်းတို့အမည် စာရင်းများကို အက္ခရာစဉ်လိုက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ရှင့်…….
(၁၁)ဦးအောင်ဟိန်း (တာကလေး) ရပ်ကွက်တို့ဖြစ်ပါတယ်၊
၄င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အချက်အလက်များကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။ ကျန်(၁၁)ဦးကိုလည်း ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ကျွန်မတို့ လက်လှမ်းမမှီ သည့်ဒေသများ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ပြည်စုံ မှု့မရှိသည်ကို သည်းခံနားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးပါရန် ကျွန်မက မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။ရွေးချယ်တင်မြှောက် အဖွဲ့တွင် မိမိဆန္ဒရှိသူ ကိုအဆိုပြုရာတွင် အဆိုပြုရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် မိမိ အဆိုပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် ကိုတက်ရောက်သူများ သိရှိစေရန် တင်ပြပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင် ကြောင်းကိုတင်ပြအပ်ပါတယ် ရှင့်….
ကျွန်မတို့နည်းသူ အကြံပြုချင်သူများကို လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ရှင့်…. ကျွန်မ တို့ ဟင်္သာတသူအဖွဲ့ တင်ပြချက်ကို ရိုးသားစွာ ထင်မြင်ချက် အထူးဝမ်းမြှောက် ပါကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဝင် အားလုံး နှင့်ပြည်သူအားလုံးအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်